Ku faraxsanow jirkaaga shaqada uu qabto - balse ha eegin qaabka aad u egtahay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Ku faraxsanow jirkaaga shaqada uu qabto – balse ha eegin qaabka aad u egtahay
September 16, 2020 at 08:04 Ku faraxsanow jirkaaga shaqada uu qabto – balse ha eegin qaabka aad u egtahay2020-09-16T08:04:27+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Xigashada Sawirka, Tiktok @summerkmorgan / @danieledriusso / BBC
Haddii sida dhabta ah aad uga hadashid, dadka waxay is barbardhig ku sameeyaan muuqaallada dadka kale, iyaga oo adeegsanayo baraha bulshada iyo sawirro iyo muuqaallo kala duwan ee ay ku arkaya halkaas.
Waxaa baraha bulshada sida TikTok iyo Instagram ku soo badanayay olole ku saabsan in la eego “shaqada uu jirkaaga kuu hayo iyadoo aan la egeynin qaabka aad u egtahay”.
“Intii aad oran laheyd ‘waad buuran tahay ama jir qurxoon baad leedahay’….waxaad oran kartaa, ‘kani waa jir bani’aadam oo shaqo hayo’,” waxaa sidaas tiri, Erynn Chambers oo in muddo ah wadday ololaha dhaqdhaqaaqa isku dheelitirnaanta jirka iyo midabada kala duwan.
Waxaa suuragal ah in aad horey u maqashay, ololaha waxtarka jirka, iyadoo aan la eegeyn qofka jinsiyaddiisa, muuqaalkiisa ama awooddiisa.
Erynn Chambers waxay ku anddacooneysaa in marka aad ka hadleyso isku dheelitirnaanta jirka, tusaale ahaan in aadan odhan “Waa gacantii ugu qurxooneyd ee abid aan arko nolosheyda”.
Xigashada Sawirka, TikTok / @rynnstar
Muxuu yahay isku dheelitirnaanta jirka?
Ololaha ku saabsan isku dheelitirnaanta jirka wuxuu sharraxaad ka bixinayaa waxkaqabadkiisa ama waxtar la’aantiisa, sida ay sheegeyso Erynn.
“Mararka qaar waxaa jiro cadaadiis ah in markasta aanu jecel nahay jirkeena …in aad isku kalsoonaan …marka haddii aadan isku kalsooneyn ama in kale, waa arrin adiga ku khuseysyo.”
Erynn waxay ka hadleysaa labo fikradood oo ay dadka aaminsan yihiin.
“Waxaan marar badan maqlaa dad dhahaya ‘ma jecli jirkeyga, waxaan doonayaa in aan isbedel ku sameeyo jirkeyga’ ama kuwo odhanaya ‘waxaan jeclahay jirkeyga, waan qurxoonahay’ ama ‘waxaan doonayo in aan karaahiyeysto jirkeyga’.”
Erynn ayaa dhawaan soo gelisay barta TikTok, muuqaal ay ka hadleysay khibaraddeeda ku aadan ololaha isku dheelitirnaanta jirka, waxaana muuqaalkeeda jecleystay 52,000 qof.
Muuqaallada ku saabsan ololahan waxaa barta TikTok ka daawatay in ka badan 6 milyan oo qof, halka barta Instagram ay ka daawadeen 63,000 oo qof.
Sideen ku tijaabiyaa, khubarada na maxay ka yiraahdeen?
Sida ay sheegeysa Erynn, waa in aad isku kalsoonaataa oo noloshaada ka hadashaa.
“Haddii aad muraayad isku fiirineyso, waxaa laga yaaba in aad oran ‘aniga waan qurux badanahay’, waxaa suuragal ah inaadan isku kalsooneyn. Waa in aad tiraahdaa “aniga waxaan ahay qof nini-aadam ah sababta oo ah waa arrin aan la diidin karin oo dhab ah.”
“Haddii aad dooneyso in aad tidhaahdo “waxaan ahay gabadh qurux badan, oo aad dhalaaleyso muuqaal iyo jir ahaanba, waxaa haboon in aad dhahdo ‘aniga waxaan ahay qof bani’aadan ah'”.
Dr Morgan Francis oo ku takhasustay daweynta dhimirka, waxay bukaanada kula talisaa inay u mahadceliyaan shaqada uu qabto jirkooda “taas oo qeyb ka ah isku dheelitirnaanta jirka iyo sida ay maskaxda u aragto”.
Waxay ku adkeysanaysaa in laga fakaro sida uu jirkaaga yahay in aysan ka dhigneyn inaadan rabin caafimaadkaaga.
« Qoor Qoor iyo Axmed Madoobe oo kulan gaar ah yeeshay
“Wiilkeygu dad ma dilin, dad ma dhicin, ma aqaan dambiga Mareykanka looga musaafurinayo” »